FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA TRONDRO SINOA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika trondro sinoa
(Volo sy vovoka)
'Ireto ny Cresteds Shinoa roa, Preston (tsy misy volo) ary Baxter (vovoka). Mpiara-monina izy ireo ary manodidina ny 18 volana eo amin'ny sary. Alika tsara fitondran-tena, tsara miaraka amin'ny ankizy ary samy tia ny any ivelany amin'ny fahagagana amin'ity hafanana Texas ity. '
Lisitry ny alika mitetika mifangaro sinoa
pou-der puhf chy-NEEZ KRES-tuhd
Misy karazany roa ny Alika Voahosotra Sinoa, ny 'volo tsy misy volo' ary ny 'vovoka.' Ny karazany tsy misy volon'ondry dia izay: tsy misy volo, afa-tsy ny tongony, ny lohany ary ny rambony. Ilay palmo dia manana palitao lava sy malefaka. Ny sasany amin'ireo mpiompy mandraka androany dia 'siny', araka ny iantsoany azy, ireo vovoka rehefa teraka izy ireo, noho izy ireo nilaza fa tsy dia mendrika loatra. Rehefa 'siny' alika kely ny mpiompy dia midika izany fa alatsany ao anaty rano iray siny izy rehefa teraka ary avelao ho faty. Alika tsara tarehy miaraka amin'ny akanjo feno volom-borona ny karazany isan-karazany amin'ny vovoka ary olona maro no tsy mahatsapa fa misy izy ireo satria maro amin'ireo tranonkala no mampiseho ny karazany tsy misy volo. Ireo karazany roa ireo dia eken'ireo klioban-javaboary lehibe ihany koa.
Ny hoditra sy ny palitao dia mety misy loko, ary miorina, mifangaro na voadinika manerana. Ny karazany tsy misy volo na volo dia azo ateraka ao anaty fako iray ihany. Ny lohan'ny Sinoa Crest dia miendrika wedge raha jerena avy any ambony sy amin'ny lafiny. Misy fijanonana kely ihany ny sombin-kazo ary apetaka tsara ao anaty takolaka ny takila. Ny lokon'ny orona dia mety maizina amin'ny mazava, miankina amin'ny lokon'ny hoditra sy ny palitao. Ny maso sy ny molotra maso dia manana loko mifanaraka amin'ny lokon'ilay alika. Ny sofina lehibe dia tsy voakapa ary miarina. Mety hesorina ny demonia.
faribolana collie laboratoara mifangaro volontany
Ny malaza indrindra amin'ny karazany tsy misy volo, ny Crest Shinoa dia mbola tsy fahita firy. Ireo alika ireo dia mailo, mahasarika, mailaka ary be fitiavana. Na dia tia sy milalao ankizy aza ny ankizy dia tokony ampianarina ny ankizy mba tsy ho sarotiny amin'ny karazany ity satria sariaka izy, fa tsy manana volo miaro an'ny hafa karazana ary mety haratra mora foana. Mpanentana mampiala voly sy mampihomehy izy io. Aza atao an-jaza ity karazany ity na mety hahatonga anao ho saro-kenatra izany. Araraoty tsara ny alikao , manomboka rehefa alika kely izy, mampiseho amin'ny tabataba mafy sy ny hetsika any ivelany. Ity alika manan-tsaina ity dia manana fahaizana manao fikafika. Amin'ny ankapobeny dia tsara miaraka izy ireo biby hafa . Tsy mpikotrika izy ireo. Ny alika mpiambina sinoa dia tia mianika sy mihady lavaka. Manjary mifamatotra amin'ny tompony izy ireo. Ireo alika ireo dia mankafy fiaraha-miasa ary mila fitarihana olona tsy tapaka. Aza avela hianjera amin'ny 'ity karazany mahafinaritra ity' Syndrome kely alika 'any amin'izay tsy ananany a mpitondra entana olombelona . Mora ny miteraka alika kely, na izany aza, ny fanaovana izany dia mety miteraka fihetsika tsy ilaina maro. Raha misento ny alikanao, miambina zavatra, mipoaka na manaikitra, dia avela handray azy ny alika ary ho mpitarika ny olombelona. Ireo fihetsika ireo dia azo ahitsy raha vantany vao manomboka mampiseho ny fitarihana mety ny olombelona.
Hahavony: 12 santimetatra (30 cm)
Milanja: tsy mihoatra ny 4,5 kilao (4,5 kg)
Mora mahazo lanja dia aza be loatra. Ny hoditra miharihary amin'ireo alika tsy misy volo dia mila fikarakarana manokana hisorohana ny fahasosorana amin'ny hoditra. Mahazo tokoa ireo alika tsy misy volo sunburn ary sunscreen tsara tokony hampiasaina raha hivoaka amin'ny masoandro ny alika. Ny karazan-tarehy tsy misy volo dia mora resin'ny nify sy lo. Manana nify mahasalama kokoa ny vovony. Ny karazany tsy misy volo dia manana nify kaninina mandroso na 'tenda' araka ny fiantsoana azy, fa mazàna ireo no nify voalohany latsaka. Ny isan-jaton'ny Cresteds sinoa dia tsy mahazaka volon'ondry sy lanolin. Samy teraka ao anaty fako iray ihany ireo alika tsy misy volo na volo. Ny alika tsirairay tsy misy volo dia samy mitondra ny gony iray ho an'ny volo ary ny iray amin'ny volo. Ny fototarazo roa tsy misy volo dia mahafaty.
Tsara ho an'ny fiainana an-trano. Mavitrika ao an-trano izy ireo ary tsy maninona raha tsy misy tokontany. Tokony hanao akanjo ba mafana izy ireo amin'ny andro mangatsiaka.
alika omby aostraliana sy fifangaroan'ny laboratoara
Na dia manintona aza ny fitondrana ireo zavaboary marefo ireo, dia alika kely mavitrika mila a mandeha isan'andro . Ny lalao dia hikarakara be dia be ny filan'izy ireo manao fanatanjahan-tena, na izany aza, satria ny karazany rehetra dia tsy hanatanteraka ny toetrany voalohany handehanana ny lalao. Ny alika izay tsy afaka mandeha amin'ny diabe isan'andro dia azo inoana fa mampiseho olana maro amin'ny fitondran-tena. Izy ireo koa dia hankafy romp tsara amin'ny faritra azo antoka sy malalaka tsy hitarihana, toy ny tokotanin-trano mimanda. Aza mieritreritra fa satria kely izy dia tokony voafatotra amin'ny toerana kely.
10-12 taona eo ho eo.
Ankizy 2 ka hatramin'ny 6 eo ho eo
Ny Cresteds sinoa dia tena madio, tsy misy fofona doggie. Mila fikolokoloana bebe kokoa ny vovo-vovoka. Ny fanosorana ny palitao lava lava sy tsara ary indroa isan'andro dia ny fikosehana isan'andro ny alika rehefa mandatsa ny alika. Manjary matotra ilay akanjo lava misy volon'ondry raha tsy atao ambanin-javatra. Mandroa matetika ny volo ary manosotra diloilo na crème kely amin'ny hoditra hitazomana azy ho malemy. Ireo alika ireo dia tsy mandany volo firy ary tsara ho an'ireo marary allergy. Ny karazan'akanjo tsy misy volo dia tsy dia mora parasy. Afaka mahazo kongona toy ny olombelona ihany izy ireo, saingy mora jerena.
Ny Crest Shinoa dia nipoitra tany Afrika izay nantsoina hoe 'Terriers Hairlessless Africa'. Ny sambo mpivarotra sinoa dia nijanona teny amoron'ny moron'i Afrika amin'ny làlan-kalehany ary nitondra ny alika an-tsambo hisambotra vermin. Nantsoin'izy ireo hoe 'Sinoa Voadidy' ireo alika ary nikatona ilay anarana. Ny foko amerikanina (Aztecs) mpivahiny nitazona azy ireo ho mpanafana fandriana ary nihinana azy ireo koa. Cresteds sinoa roa no naseho voalohany tamin'ny taona 1885 tao amin'ny Westminster Kennel Club Show any New York. Na izany aza tamin'ny 1965, noho ny tsy fisian'ny kliobam-pirenena hanohana ny karazany sy ny isan'ny alika dia vitsy dia ambany ny AKC dia natsipy ny fahazoana azy ireo haseho. Ny klioban'ny amerikana voalohany dia natsangana tamin'ny 1979 ary neken'ny AKC izy ireo tamin'ny taona 1991. Ilay bandy mpanao sipa Gypsy Rose Lee dia zatra namorona sinoa Crested. Ny Sinoa Crest dia aseho matetika amin'ny fampisehoana alika tsy fahita firy.
Atsimo, kilalao AKC
Louie ilay Sinoa Crest Powderpuff amin'ny faha-7 volana
manao ahoana ny fisehoan'ny labrador retriever
Gracie ny alika sinoa vovoka Powderpuff
Wilbur ilay vovo-dronono sinoa voan'ny 3 taona
Alika kely Crested Shinoa antsoina hoe Harry mandritra ny 13 herinandro
tsara dane st bernard mifangaro alika kely
Faiter Samuraj aka Pixie ilay Sinoa Crested dia lehibe daholo
Jewel's Simple Irresistible at Hpnotik, aka Sisko ilay alika voahosotra sinoa alika alika amin'ny 12 herinandro- 'Sisko dia zazalahy voadidy sôkôla tsy volo. Nasiany sarimihetsika ao anaty sary ny sofiny hanampy azy ireo hijoro! '
Tompondakan'ny Japoney / Amerikana Vanitonia Monkey Business AOM / SOM ambony nampiditra 2011-2012 - sary nahazoana alàlana avy tamin'ny Jewels Chinese Crested
'Shelby dia sinoa 6-kilaometatra, 11 volana an-tsokosoko avy any Massachusetts. Tia ankizy sy saka izy! Ny sakaizany akaiky indrindra dia a Brussels Griffon nantsoina hoe Zao izy ireo no mpivady hafahafa hitanao indrindra! '
Porky ao BoulderCrest Ranch ilay alika kely Powderpuff Shinoa 5 volana— 'Porky, rehefa miantso azy am-pitiavana isika, dia tia mihinana. Izy dia prospect fampisehoana tampony. Samy tompon-daka ny sire / dam-ny. Manana fihetsiketsehana sy palitao hahafaty azy izy. Tena tiana sy ankafizina izy. ' Sary natolotry ny BoulderCrest Ranch, mpiompy Powderpuff tena tsara kalitao
Lehilahy niakanjo maranitra 'Tux' ilay alika kely Powderpuff Sinoa tamin'ny volana 4 - 'I Tux dia fananan'i Jodi any Florida am-pitiavana.' Sary natolotry ny BoulderCrest Ranch, mpiompy Powderpuff tena tsara kalitao
Zahao ny ohatra misimisy kokoa momba ny Sinoa Crested
Sary sinoa voafitaka 1
Sary sinoa 2
Sary sinoa voafitaka 3
Sary sinoa voafitaka 4
Sary sinoa 5
Sary 6 namboarina sinoa 6
Sary sinoa voafitaka 7
Sary sinoa nesorina 8
Taranaka tsy misy volo
fisaka miloko atiny retriever mifono
alika kely milalao alika antitra
alika kely taco terrier amidy
Malagasy Eskimo sheltie Mix amidy
fifangaroana spaniel volamena retriever volamena
mena cavalier mpanjaka Charles spaniel
yorkie afangaro amin'ny alika kely chihuahua